Babhekene ngeziqu zamehlo o-DJ bodumo baseThekwini | News24
LAST UPDATED: 2018-11-16, 14:28
Babhekene ngeziqu zamehlo o-DJ bodumo baseThekwini
Durban - Abasabhekani oDJ bodumo baseThekwini. Izimpukane eziluhlaza zithi isimo asisihle phakathi kwalab' oDJ, okunguDJ Tira (Mthokozisi Khathi) ongumnikazi we-Afrotainment noDJ Fisherman (Sfiso Mjoli) ongumdidiyeli ngaphansi kwale nkampani.
UDJ Fisherman waKwaNdengezi kubikwa ukuthi akasasondeli nokusondela emahhovisi e-Afrotaiment. Imithombo yeLANGA LangeSonto esondelene naye lo DJ ipotshozele leli phephandaba ukuthi isimo sibi impela phakathi kwabo.
UDJ Fisherman kuthiwa akeneme neze ngendlela izinto ezenzeka ngayo e-Afro, ukhala kakhulu ngokuthi akanakiwe yena njengomuntu omdala enkampanini.
Lo mthombo uphinde wadalula ukuthi uDJ Fisherman kumanje uxhumana nabameli bakhe, bahlela ukubopha le nkampani kaDJ Tira. Kuthiwa usola i-Afrotainment ngokungamkhokheli imali yama-royalties engoma eshise izikhotha iHappy Song.
OLUNYE UDABA: Bacishe babambana ngezihluthu emcimbini o-DJ Tira noProfessor
"UFisherman ufuna uTira amkhokhele izigidi zamarandi. Ukhala ngokuthi akatholanga lutho emalini yakwaSuperSport njengoba le ngoma ibisetshenziswa yibona," kuqhuba umthombo.
Ethintwa yileli phephandaba uTira uzwakale sengathi uphelelwa umoya uma ebuzwa ngalolu daba. Uthe uDJ Fisherman akahlangani kancane nale ngoma, ngakho-ke akanalo igunya lokufuna ama-royalties ayo.
"Akenzanga lutho uFish kule ngoma. Abantu abafaka isandla nguDJ Tira, yiBig NUZ, yase ididiyelwa yi-Infinite Boys - ngakho-ke ayikho into ayikweletwayo," kuchaza uDJ Tira.